Casharrada tallaabo-tallaabo | Xogta, internetka iyo tikniyoolajiyadda | Wararka Gadget (Bogga 2)
Waxaan sii wadeynaa inaan aad u isticmaalno codsiyada wicitaanka fiidiyowga sidaan filayno. Soo dhawaatay ayaa jirtay, ilaa iyo markii ay bilaabatay ...
In kastoo aysan u ekaan karin, Microsoft Edge waa tifaftire fantastik ah oo loogu talagalay faylasha PDF wuxuuna la kulmaa inta badan baahiyaha isticmaalayaasha.
Wicitaanada fiidiyowga ee kooxeed ee illaa 8 xubnood waxay gaarayaan WhatsApp, sida loo sameeyo
Facebook wuxuu dhigay baytariyada, laga yaabee inay ugu wacan tahay xiritaanka iyo sida adag ee barnaamijyada noocan ah imika u garaacayaan.
Sida loola wadaago internetka taleefanka ilaa PC ama Mac
Waxaan ku tusaynaa ikhtiyaarro kala duwan oo aad heli karto si aad ugala wadaagto internetka qalabkaaga Android ama iOS
Sida loo xiro ilaalinta astaantaada haddii aad wadaagto koonto Netflix
Hadda Netflix wuxuu na siiyaa suurtagalnimada inaan ku ilaalino astaan ​​kasta biin, si looga hortago carruurta ama isticmaaleyaasha kale inay helaan.
Sida loo furo dekedaha loona hagaajiyo isku xirnaantaada ciyaaraha fiidiyowga
Waxaan kuu sharraxeynaa sida aad ugu adeegsan karto martida loo yaqaan 'DMZ Host' inay ku furaan dhammaan dekeddaha isla markaana ay si weyn u wanaajiyaan tayada isku xirnaantaada marka aad ciyaarayso ciyaaraha fiidiyowga.
Sida sawirada looga baaro Google
Markan waxaan ka hadli doonaa suurtagalnimada raadinta sawir ee ay bixiso Google waxaanan kuu sharxi doonaa sida aad u adeegsan karto
Sida loo horumariyo waxqabadka ciyaaraha ee Android
Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loo hagaajiyo waxqabadka ciyaaraha qalabkeena Android qaab fudud oo dhakhso leh.
Sida loo wadaago qoraalada sheekooyinka Instagram
Maanta waxaan kuu sheegeynaa sida nolol badan loogu siiyo sheekooyinkaaga 'Instagram' iyo sida loola wadaago daabacaadaha iyo sheekooyinka kale ee iyaga ku jira
Sida loo isticmaalo liisaska baahinta WhatsApp
Maanta looma baahna in la sharaxo waxa WhatsApp yahay, ama aan sharaxaad ka bixin isticmaalkiisa, ama caan ahaanta uu leeyahay ...
Maxaa ku cusub Android 11 Developer Beta iyo sida loo rakibo
Halkan waxaan ku faahfaahin doonnaa dhammaan wararka muhiimka ah ee Horudhaca Horudhaca ah ee Android 11 keenayo, iyo sida loogu sii ambaqaado rakibiddeeda tillaabooyinka fudud.
Sida loo aamusiyo ereyada gaarka ah iyo hashtags-ka Twitter
Waxaan ku tusineynaa sida aad ugu aamusi karto ereyo gaar ah ama ishtags Twitter qaab fudud oo dhakhso leh. Laga soo bilaabo qalab kasta
Sida faylasha waaweyn loogu diro emayl ahaan
Waa wax caadi ah, ku dhowaad xirfad kasta, inaad noo soo dirto faylal, sawirro, dukumiintiyo emayl ah ... Halkii aad ka daabici lahayd, ...
Sida loo xakameeyo aalad kasta oo gurigaaga ku jirta oo leh Alexa iyo Google Home
Maanta waxaan dooneynaa inaan ku tusino sida aad si fudud ugu isticmaali karto qalab kasta oo ka socda TV-ga illaa qaboojiyaha adigoo adeegsanaya Alexa iyo Google Home.
Sida loo arko meesha aan sawir kaga qaadnay taleefankeena
Markaan aragno meesha ay ku yaalliin sawirada aan ku qaadaneyno taleefannadeenna casriga ah, haddii ay tahay Android ama IOS, waa geedi socod aad u fudud oo aan si faahfaahsan uga hadlayno qodobkaan.
Sida loo sameeyo keyd buuxa oo taleefankaaga ah
Mid ka mid ah maaddooyinka looga baahan yahay dugsiyada, gaar ahaan hadda inta badan ...
Sida loo ogaado haddii WiFigayga laga xado Android
Sida loo ogaado wakhti kasta haddii WiFi la xado iyadoo la adeegsanayo qalab loo heli karo aaladaha Android
Sida loogu qaado liisanka wadista taleefankeena casriga ah
Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loogu qaado liisankaaga wadista taleefankaaga casriga ah, iyo sidoo kale dukumintiyada baabuurtaada oo aad wax walba u maamusho
Sida loo joojiyo aragtida qoraallada barta Instagram-ka iyada oo aan la raacin
Waxaan ka bilaabeynaa aasaaska in celcelis ahaan ay tahay in la helo hal ama dhowr xisaabood inta u dhaxeysa Instagram, Facebook, Twitter, iwm. By…
Sida loo kala qaado shaashadda Windows 10 iyo Mac
Qaybinta shaashadda kombiyuutarkayagu, ama ha ahaado Windows ama macOS, waa hawl aad u fudud oo aan u baahnayn rakibidda codsiyada dhinac saddexaad.
Sida loo arko shaashadda iPhone-ka ee TV-ga oo leh ChromeCast
Halkan waxaan ku ogaaneynaa sida loo arko waxyaabaha ka socda iPhone-keena shaashadda telefishanka, mahadnaqa Google ChromeCast
Sida loo hagaajiyo waxqabadka Windows 10
Ma jiro nidaam qalliin oo qumman, midna. Mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah, ha ahaato macOS, macruufka, Android, distro ...
Sida loo adeegsado saamaynta cusub ee Boomerangs barta Instagram
Instagram (oo ay iska leedahay Facebook Inc.) ayaa sii kordheysa iyada oo ay ugu wacan tahay astaamaheeda cusub. Waxay is taagtay labadii sano ee la soo dhaafay ...
Sida loo demiyo Windows Defender-ka Windows 10
Haddii aad rabto inaad ku rakibto antivirus Windows 10, talaabada ugu horeysa ee qasabka ah ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad disho Windows Defender, hadii kale ma awoodi doontid inaad ku rakibto
Sida loo nadiifiyo loona keydiyo booska ku yaal Android-kaaga
Waxaan ku tusineynaa sida aad u nadiifin karto oo aad u keydin karto booska qalabkaaga Android si fudud oo hufan, iyada oo aan loo baahnayn barnaamijyo dhinac saddexaad ah
Wareejinta feylasha inta udhaxeysa iPhone iyo Android aad ayey ugu fududahay SnapDrop
Beddelka ah si loogu wareejiyo faylalkayaga Android ama iPhone masaafo gaaban oo hab fudud ah adoo adeegsanaya xiriirkeena Wi-Fi ee routerka guriga
Sida loo beddelo ROM-ka loona diiwaangeliyo dammaanadda OnePlus laga iibsaday Shiinaha
Halkan waxaan ku sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loogu diiwaangeliyo terminaalkaaga mid lagu daray websaydhka si loo helo dammaanad rasmi ah loona beddelo ROM-ka rasmiga ah ee Yurub.
Sida loo rakibo loona qaabeeyo Google Home
Casharradan fudud waxaan ku sharaxeynaa sida loo qaabeeyo loona rakibo Google Home gurigeenna caqliga badan ugana faa'iideystaan.
Sida loo codsado lacag celin arji ama ciyaar ka socota Play Store iyo App Store
Intii lagu guda jiray 90-meeyadii iyo horraantii 2000-meeyadii, burcad-badeednimadu waxay ahayd mid maalin walba hagaagsan, si fududna uma ahayn ...
Sida loo beddelo IP-ga dadweynaha
Soo hel hababka ugu wanaagsan ee aan adeegsan karno haddii aan dooneyno inaan beddelno IP-ga Dadweynaha markii aan ku xirno internetka kombiyuutarka.
Sida tooska ah loogu gudbiyo emaylka Gmail
U soo gudbinta dhammaan e-mayllada aan ku hayno emaylka emaylka ee 'Gmail' waa hab aad u fudud oo ay ugu mahadcelinayso Codsiga Weyn ee Emailka Badan
Soo ogow xulitaankan barnaamijyada ah ee 'Android' ah ee naga caawin doona inaan ogaano in aan xidid ku nahay taleefanka si aan had iyo jeer u helno macluumaadkan.
Sida loo soo dejiyo muusikada Spotify
Soo ogow talaabooyinka si aad ugu soo dejiso heesaha ama boodhadhka 'Spotify' taleefankaaga gacanta talaabooyin fudud oo fudud.
Tirtir fiidiyowyada YouTube-ka iyo kanaalada aan ku danaynayn kordhintan
Soo ogow sida looga saaro fiidiyowyada ama kanaalada YouTube-ka ee aadan xiiseyneynin inaad ka daawato shabakadda mahadnaqa kordhinta biraawsarkaaga.
Sida loo rakibo barnaamijyada iPhone-ka iyada oo aan lahayn App Store-ka leh AltStore
Haddii aad rabto inaad ogaato habka kale ee aan gacanta ku hayno si aan ugu rakibno barnaamijyada iPhone-ga, iPad ama iPod taabashada, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhriska.
Soo hel dhammaan hababka aan u adeegsan karno si aan uga saarno lambarka taleefankeenna Facebook-ga oo aad uga hortagto in shabakadda bulshada ay hesho macluumaadkan.
Sida looga hortago dacaayadaha doorashada inay gaaraan sanduuqaaga boostada
Doorashooyinka sannadkan 2019 waxay ku soo dhowaanayaan Spain, wax ka beddelka Sharciga Doorashooyinka intii lagu jiray 2018 wuxuu awood u siiyay ...
Soo ogow aaladaha ugu fiican ee aad sawirrada kaga soo saari karto fiidiyowyadaada YouTube-ka iyo daqiiqado ku qabso fiidiyowyadaas.
Sida loo hagaajiyo cilladaha ku jira Android ee ka baxa batterigaaga
Raadi sida loo xaliyo fashilaadan saameyneysa qaar ka mid ah dadka isticmaala Android batteriga taleefannadooda gacanta.
Maxay ku kala duwan yihiin 5G NSA iyo 5G SA
Raadi wax badan oo ku saabsan kala duwanaanshaha iyo muhiimadda 5G NSA iyo 5G SA hadda oo 5G suuqa laga soo gelinayo.
Sida loo qaabeeyo darawalka adag ee banaanka
Soo ogow dhammaan siyaabaha aad u adeegsan karto markii aad qaabeynayso waddo adag oo dibadda ah oo ka socda kombiyuutarkaaga Windows, Mac ama Linux.
Sida loo helo qof barta Instagram
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka lagu helo qof barta 'Instagram' iyo waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso markaad raadineyso koontada 'Instagram' ee qofka
Halka laga akhriyo buugaagta khadka tooska ah
Sida Skype u shaqeyso
Soo ogow shaqooyinka ugu muhiimsan ee Skype si aad u barato sida loogu isticmaalo barnaamijka kombiyuutarkaaga ama casrigaaga qaab fudud.
Maxay yihiin xisaabaadka la wadaago ee Gmail iyo sida loo qaabeeyo
Soo ogow sida loo wadaago akoonka gmail iyo sida loo dejiyo mid loo adeegsado shaqada dadka kalena loo ogolaado inay ku helaan boostadaada.
Sida loogu isticmaalo istiikarada Telegramka WhatsApp
Ma rabtaa inaad ku soo dejiso istiikarada badan WhatsApp? Waxaan kuu sheegeynaa sida loogu dhejiyo istiikarada Telegramka WhatsApp gebi ahaanba bilaash
Sida loo dhigo iskudhafka khariidadaha Google
Soo ogow sida aad iskuduwaha ugu dhigi karto Khariidadaha Google ama aad u ogaato isuduwayaasha meel cayiman oo aad ka raadineyso khariidada.
Sida loo abuuro koonto Skype ah
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka jira si loo abuuro koontada Skype ee kombiyuutarkaaga ama casrigaaga iyo sida loo beddelo macluumaadka koontadaada.
Sida loo sameeyo tixraacyada ereyga
Soo ogow sida aan ugu abuuri karno tusmooyin dukumiinti ku jira Ereyga iyo habka loo qaabeeyo muuqaal ahaan si ka wanaagsan iyaga loo isticmaalo.
Sida loo diiwaangaliyo barta Instagram
Raadi wax badan oo ku saabsan habka aad iskaga diiwaangelin karto barta internetka ee kumbuyuutarkaaga ama taleefankaaga gacanta. Dhamaan siyaabaha loo sharaxay.
Sida loo rakibo iOS 13 beta iPhone iyo iPad Windows iyo Mac
Haddii lagugu dhiirrigeliyey inaad rakibto beta-ka ugu horreeya ee iOS 13, qodobkan waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo labadaba Windows iyo Mac.
Sida loogu daro dariiq toobiye bilowga Windows-ka
Waxaan ku tusineynaa sida aad abuurka ugu abuuri karto Windows-ka menu bilowga ah galka, feylka ama arjiga. Ma taqaanaa sida loo sameeyo?
Sida looga baxo HBO
Haddii mar haddii Game of Thrones dhammaado, waxaad u maleyneysaa in la gaadhay waqtigii la joojin lahaa rukunkaaga HBO, qodobkan waxaan ku tusinaynaa dhammaan tallaabooyinka la raacayo.
Sida loo saxo dukumiintiga PDF
Waxaan kuu sheegeynaa xulashooyinka ugufiican ee aad PDF uga tafatiri karto kombiyuutarkaaga: bogagga shabakadaha, barnaamijyada iyo waxyaabo kale oo badan. Baro sida wax looga beddelo dukumintiga PDF halkan.
Sida loo abuuro erey sir ah
Soo ogow dhinacyada ugu muhiimsan ee lagu xisaabtamo si aad si fudud ugu sameysato lambarkaaga sirta ah oo aamin ah.
Sida loo isticmaalo Uber
Waxaan si fudud oo dhakhso leh ugu sharaxeynaa talaabooyinka la raacayo si loo isticmaalo Uber, oo ah ta ugu raqiisan tagsiga. U hel € 5 safarkaaga ugu horreeya.
Sida loo ogaado haddii laptop-kayga uu leeyahay Bluetooth
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka jira si aad u hubiso haddii laptop-kaaga uu leeyahay Bluetooth, labadaba laptop-ka Windows iyo Mac-ba.
Sida fiidiyowyada loogu soo galiyo Facebook
Soo ogow sida aad fiidiyowyo ugusoo rogi karto Facebook kombiyuutarkaaga iyo barnaamijka moobilkaaga ama kiniinkaaga ee Android iyo iOS.
Maxaa dhacaya haddii aan qof ka xayiro WhatsApp
Soo ogow cawaaqibka ay leedahay haddii aad xirto xiriir ku saabsan WhatsApp si aad u ogaato waxa laga yeelayo kiisaskan haddii aad ka shakiso sida loo xannibo qof.
Sida loo nadiifiyo diiwaanada vinyl-ka
Waxaan ku baraynaa sida saxda ah ee loo nadiifiyo diiwaanka vinylka si aan loo dhaawicin. Ka fogow boodboodka iyo in ay ku waxyeeloobeen wasakhda.
Sida loo abuuro dhacdo on Facebook
Soo ogow sida aad ugu abuuri karto dhacdo Facebook, haddii aad raadineyso inaad abuurto dhacdo gaar ah ama dhacdo dadweyne. Talaabo talaabo loo sharaxay.
Sida looga saaro kuwa raacsan barta Instagram
Ka ogow wax badan oo ku saabsan muuqaalka ka saarista kuwa raacsan barta Instagram. Sida looga saaro kuwa raacsan iyo waa maxay cawaaqibta ka dhalan karta tan xisaabteyda.
Sida loo tirtiro dhammaan farriimaha Facebook
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka jira si aad u awooddo inaad tirtirto dhammaan farriimaha aad ku hayso Facebook, labadaba miiskaaga iyo barnaamijkaaga Android.
Soo ogow codsiyada ugu fiican ee lagu furo faylasha CBR, labadaba PC, Windows, Mac, iOS ama Android. Sidee loo furaa feylashaasi?
Waa maxay macnaha CC iyo CCO
Soo ogow waxa ay yihiin, sida loo isticmaalo, iyo farqiga u dhexeeya CC iyo Bcc ee cinwaanka emaylka ee Gmail ama aaladaha kale ee emaylka.
Sida loo daawado fiidiyowyada YouTube-ka offline
Waxaan ku tusineynaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku daawato fiidiyowyada YouTube-ka adigoon ku xirneyn internetka. Sideed u daawan kartaa fiidiyowyada YouTube-ka xog la'aan iyo xiriir la'aan?
Sida loo xareeyo ogeysiiska canshuuraha ee WEB adigoo adeegsanaya internetka
Waxaan ku jirnaa ololaha Dakhliga, xilligaas baqdinta leh ayaa yimid oo aadan ka baxsan karin, ugu yaraan sanadkiiba hal mar.
Sida jadwalka loogu diro emaylka Gmail
Bishii Abriil 1, 2004, shirkadda weyn ee raadinta ayaa soo bandhigtay adeegga emaylkeeda, ...
Sida loo kiciyo koontadayda Facebook
Ma ka daashay Facebook? Soo ogow talaabooyinka la raacayo si aad si ku meel gaar ah u joojiso koontadaada Facebook ama aad si joogto ah u tirtirto.
Sida loo qaabeeyo kiniiniga Android
Soo ogow dariiqooyinka jira si aad u qaabeyso kiniin Android ah. U daa warshadda si ay dhakhso ugu socoto oo aan khaladaad lahayn. Ma taqaanaa sida loo qaabeeyo kaniinigaaga?
Baro inaad uqeybiso PDF dhowr qaybood, ama ka soo saar bogag, adoo adeegsanaya casharradan fudud oo aan loo baahnayn inaad ku rakibto barnaamij kasta
Soo ogow talaabooyinka la raacayo si aad sawirro ugu soo geliso boggaaga 'Instagram' kombiyuutarkaaga dhammaan tallaabooyinka la sharraxay.
Waxaan ku baraynaa sida loo isticmaalo iCloud qalab kasta hab fudud. Ma ogtahay faa iidooyinka uu leeyahay iCloud? Halkan ka baro.
Sida sawirrada looga soo dejiyo Facebook
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka jira si aad uga soo dejisan karto sawirro Facebook labadaba kombuyuutarkaaga iyo casrigaaga Android.
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka aad virus uga saarto Android-ka. Laga soo bilaabo soo celinta, ka saarida barnaamijyada ilaa adeegsiga habka nabdoon ee taleefanka.
Sida loo codsado xaqiijinta akoonkeyga Instagram
Ma rabtaa inaad xaqiijiso koontadaada 'Instagram' oo aad ku darto astaanta buluugga ah? Raac tillaabooyinkan fudud si aad u barato waxa loola jeedo iyo sida loo xaqiijiyo koontadaada.
Sida loo ogaado haddii laygu xanibay Facebook
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka la heli karo si aad u ogaato haddii qof kaa xannibay Facebook-ga oo ma arki kartid muuqashadooda shabakadda bulshada.
Vodafone TV wuxuu yimaadaa Samsung's Smart TV, sida loo rakibo
Vodafone TV ayaa ah kii ugu dambeeyay ee ku biira buugga Tizen OS codsi, nidaamka qalliinka ee Samsung Smart TVs, waxaan ku tusi doonaa sida loo rakibo.
Sida loo beddelo magaca WiFi iyo lambarka sirta ah
Kordhi amniga shabakaddaada WiFi adigoo adeegsanaya casharradan fudud, oo baro sida loo beddelo labadiisa magac iyo furaha sirta ah.
Sidee looga soo kabtaa fariimaha la tirtiray ee Facebook
Soo ogow dariiqooyinka la heli karo si aad si fudud ugu soo ceshano farriimaha la tirtiray ee Facebook ee kombuyuutarkaaga ama Android kaaga.
Sida loogu beddelo Ereyga PDF
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka jira si aad ugu beddeli karto dukumiinti erey ah faylka PDF, khadka tooska ah iyo barnaamijyada sida Microsoft Word.
Sida loogu badalo sawirka astaanta
U badalida sawir muuqaal ah si loo asteeyo nuqulkeena Windows waa geedi socod aad u fudud oo aan ku faahfaahin doono casharkaan.
Sida loo xiro codsiyada furan ee kujira Android
Xidhitaanka codsiyada ku saabsan Android waa geedi socod mararka qaarkood qasab ku ah in taleefannadeenna casriga ahi ay si habboon u shaqeeyaan.
Sidee loo badalaa PDF-ka Ereyga
Soo ogow dhammaan siyaabaha jira ee loogu beddelayo PDF ereyga. Dhammaan siyaabaha, laga bilaabo bogagga shabakadaha, Google Docs ama Adobe Acrobat ayaa si tartiib tartiib ah loogu sharxay.
Maxaa la sameeyaa haddii mobile-kayga la xado
Ma la kulantaa xatooyada taleefannadeenna casriga ah, wax fursad ah ma u leenahay inaan ku soo ceshanno? Waxaan nasiib ku yeelan karnaa raacida talaabooyinkan oo dib ayaanu u soo celinaynaa
Sida loo Beddelo Fiidiyowga GIF
Soo ogow hababka ugu fudud uguna dhaqsaha badan si aad ugu beddesho fiidiyoo kasta GIF firfircoon oo awood u leh inaad kula wadaagto shabakadahaaga bulshada
Sida loo duubo oo loo dhejiyo Mac
Waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah xulashooyinka aan heli karno si aan ugu qabanno hawsha nuqul ka sameynta iyo dhajinta Mac iyo sidoo kale barnaamij gaar ah oo loogu talagalay
Soo ogow sida loo isticmaalo Twitter: Abuur koonto, isticmaal hashtag iyo xusa, hel kuwa raacsan ama u dir farriimo khaas ah shabakadda bulshada.
Sida qof looga xayiro Facebook
Soo ogow siyaabaha aad qof uga joojin karto Facebook adigoon ogayn ama adeegsade aan saaxiibkaa ahayn Maxay ku kala duwan yihiin tirtirka iyo xannibaadda?
Sida loo beddelo lambarka sirta ah ee 'Facebook'
Soo ogow sida aad ugu beddeli karto lambarkaaga sirta ah ee Facebook labadaba si caadi ah iyo haddii aad ilowday furahaagii hore.
Sida loo qaabeeyo kombiyuutarka
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka xilligan la heli karo si aad ugu qaabeyso kumbuyuutar Windows ah ama diskiga diskiga adag si fudud oo dhaqso leh
Waxaan falanqeyneynaa Soo-kabashada, barnaamijka soo-kabashada xogta
Waxaan falanqeyneynaa Wondershare Recoverit, barnaamijka ugu cusub uguna wax ku oolsan soo kabashada xogta ee aad ka heli karto suuqa
Sida loo dhigo xayeysiiska Wallapop
Waxaan kuu sheegi doonaa sida loo dhigo xayeysiiska Wallapop kaas oo aan ku guuleysaneyno iibka. Ma taqaanaa sida wax loogu iibiyo Wallapop? Raac tilmaamahan
Sida loo dhajiyo Instagram
Soo ogow siyaabaha aad ugu calaamadeyn karto sawir Instagram-ka, suurtagal labadaba ka hor intaadan gudbin sawir iyo ka dib marka la daabaco.
Sidee ayuu u shaqeeyaa LinkedIn
Raadi wax walba oo ku saabsan LinkedIn: shabakadda bulshada ee xirfadlayaasha. Baro wax badan oo ku saabsan waxa shabakadani tahay iyo sida ay u shaqeyso si shaqo loo helo
Sida loo kordhiyo xawaaraha shabakadaada WiFi
Baro sida loo hagaajiyo xawaaraha iyo xasiloonida shabakadaada WiFi casharkaan fudud, halkaasoo aan kuu sheegeyno tabaha ugu fiican ee aad ku sameyso.
Sida loo furo booska iCloud hab fudud oo dhakhso leh labadaba kana iPhone iyo Mac
Soo ogow dariiqooyinka aan ku beddeleyno lambarka sirta ah ee koontadeena Gmail iyo sida loo abuuro furaha sirta adag.
Sida bog loogu sameeyo Facebook
Waxaan ku baraynaa sida loo abuuro bogga Facebook talaabo talaabo ah oo loogu talagalay boggaaga, bartaada, shirkaddaada ama bulshadaada. Soo ogow sida loo maareeyo, u fiirso tirakoobka oo u habayn
Sida loo soo dejiyo fiidiyowyada Vimeo
Baro sida looga soo dejiyo fiidiyowyada Vimeo afar qaab oo kala duwan adoo adeegsanaya casharradan fudud.
Sida loo ogaado haddii iPhone-kaygu lacag la’aan yahay
Sida loo ogaado haddii taleefankayga iPhone-ka uu lacag la’aan yahay ka hor inta uusan bilaabin inuu iibsado mid ka mid ah taleefannada casriga ah
Sida loo yareeyo culeyska sawirka
Soo ogow dariiqooyinka iyo aaladaha aad heli karto si aad si fudud ugu yarayso miisaanka sawirka kumbuyuutarkaaga oo aad sidaas u badbaado.
Waa maxay Flickr iyo sida loo soo dejiyo sawirrada
Baro wax badan oo ku saabsan barxadda weyn ee Flickr, oo baro sida loo soo dejiyo sawirada tayada ugu sarreysa ee suurtagalka ah iyo habka ugu fudud ee casharradan
Sida loo diro goob WhatsApp
Sideen ugu diri karnaa goob codsi fariin WhatsApp ah xiriiradayada
Sida loo rakibo xarfaha qoraalka Mac-gaaga
Weli ma garanaysid sida loo rakibo boqolaal nooc oo noocyo caadiya ah Mac-gaaga? Ha moogaan casharkaan halka aan kuugu sheegeyno sida loo sameeyo talaabo talaabo
Sida loo tirtiro xisaabteyda Instagram
Soo ogow siyaabaha kala duwan ee aad si hufan ugu tirtiri karto koontadaada 'Instagram', ama aad si ku meel gaar ah u joojiso, oo lagu sharxay talaabo talaabo ah.
Sida loo keydiyo kaydkaaga WhatsApp ka hor inta aysan tirtirin
Haddii aadan rabin inaad lumiso wada sheekaysiga aad horay u qabtay 12-kii bilood ee la soo dhaafay, waa inaad sameysid gurmad kahor inta WhatsApp tirtirin.
Sida loo soo dejiyo fiidiyowyada Facebook
Soo ogow dariiqooyinka aad ku soo dejisan karto fiidiyowyada Facebook ee Windows, Android, Mac, iyo iOS si fudud adigoo adeegsanaya hababkan iyo qalabkan
Sida loogu beddelo sawirradaada Polaroid snapshots
Ma rabtaa inaad u beddesho sawiradaada si aad ugu ekaato in lagu qaatay Polaroid? Ha moogaan casharkaan fudud si aad sawiradaada ugu ekaato sidii waagii hore
Sidee loo nadiifiyaa shaashadaada moobaylka
Baro inaad ku nadiifiso shaashadda moobaylkaaga iyo dhammaan bannaankaba si sax ah, si dhakhso leh oo nabadgelyo leh casharradan fudud.
Sida loogu isticmaalo AirDrop qalabka macruufka iyo macOS
Waxaan ku tusineynaa sida loo isticmaalo AirDrop ee qalabka iOS iyo macOS si aad ula wadaagto dhammaan noocyada dukumiintiyada, feylasha, sawirada, iskuxirka Safari, iwm.
Sida fiidiyow looga soo dejisto barta 'Instagram'
Soo ogow dariiqooyinka aan ku soo dejineyno fiidiyowyada 'Instagram' taleefankaaga Android, iPhone ama kombiyuutarka qaab fudud.
Sida loo qaabeeyo iPad-ka
Waxaan ku baraynaa sida loo tirtiro iPad-ka talaabo talaabo marka aan dooneyno inaan iibino ama qaabeyno si aan uga bilowno xoq si ay dhaqso ugu socoto.
Soo ogow sida loogu soo dejisto fiidiyowyada Twitter-ka aaladdaada, ha noqoto kumbuyuutar Windows, Android ama iOS ah. Waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loo sameeyo.
Sida loo helo taageerayaal badan barta Twitter
Sida loo helo taageerayaal badan koontadaada Twitter. Raadi sida loo helo kuwa raacsan shabakadda bulshada ee caanka ah.
Maxaan sameeyaa haddii taleefankayga casriga ahi ku dhaco biyaha?
Soo ogow waxa la sameeyo haddii aaladdaada moobilka ay ku dhacdo biyaha ama ay qoyaan xoogaa dareere ah
Sida loo helo iPhone-kayga lumay
Sidee loo raacaa Instagram
Sida loogu helo kuwa raacsan barta Instagram tabahaan. Soo ogow dariiqooyinka ugu wanaagsan ee aad ku kasban karto kuwa raacsan shabakadda bulshada.
Sidee muusikada loogala soo bixi karaa Soundcloud
Baro siyaabo kala duwan oo aad u fudud oo aad kala soo dejiso muusikada Soundcloud oo aad ugu raaxeysato heesaha ugu fiican aaladahaaga oo dhan
Sida loo qaabeeyo pendrive-ka Mac
Sida loo sameeyo kombiyuutarkaygu si dhakhso leh
Sida loo sameeyo kombiyuutarka si dhakhso leh. Soo hel talooyinkan iyo tabahaan fudud si aad kombuyuutarkaaga uga dhigto mid dhaqso u socda.
Lix siyaabood oo laguugu banneeyo booska iPhone-kaaga
Sideen ugu furan karaa iPhone keyga booska keydinta Raac casharradan fudud oo ogow lix dariiqo oo aad ku badbaadin karto booska xusuusta iPhone-kaaga.
Sida loo rakibo Windows 10 ka USB
Ku rakibida Windows 10 ka USB waa geedi socod aad u fudud oo aan si faahfaahsan u qodobkaan.
Sida loo tirtiro Internet Explorer
Sida loo sameeyo akoon emayl
Sida loo abuuro xisaab email talaabo talaabo ah. Raadi sida loo abuuro koontadaada bixiyeyaasha emaylka ugu weyn.
Sida loo qaabeeyo iPhone-ka loona daayo sidii isagoo cusub sanduuqa
Baro siyaabaha kala duwan ee loo soo celiyo iPhone-kaaga oo aad ugu ekaato inuu sax ka baxay sanduuqa casharkan fudud.
Sida loogu isticmaalo WhatsApp kombiyuutarkaaga
WhatsApp wuxuu noqday madal isgaarsiineed ee loogu isticmaalka badanyahay aduunka, wanaag iyo wanaag labadaba ...
Sidee loo eegaa faylasha qarsoon
Dhammaan nidaamyada qalliinka, iyadoon loo eegin inay ku jiraan aaladda mobilka, qunsuliyadda, TV-ga casriga ah ...
Sideen dib ugu heli karaa aqoonsigeyga Apple
Sidee looga soo ceshan karaa sawirro tirtiray moobaylka
Soo ogow siyaabaha aan dib ugu soo ceshan karno sawirro aan si khalad ah uga tirtirnay moobilkeenna, ha noqdaan Android ama iPhone.
Sida loo qaado shaashadda Mac
Haddii aadan weli aqoon dhammaan siyaabaha macquulka ah ee macOS na siiso markaad qaadaneyso shaashadda, maqaalkan waxaad uga tagi doontaa shakigaaga.
Sida loo ogaado haddii aan haysto tigidhka taraafikada: su'aalo, jawaabo iyo tabaha
Ka raadi gurigaaga iyo khadka tooska ah haddii aad leedahay tikidh taraafikada adigoo raacaya casharradan fudud.
Waxaan ku baraynaa sida loo qaabeeyo Mac
sida loo qaabeeyo Mac
macruufka 12: waxa cusub, aaladaha la jaan qaada, sida loo rakibo iyo waxyaabo kaloo badan
Nooca cusub ee nidaamka qalliinka Apple ee iPhone-ka ayaa hadda loo heli karaa in la soo dejiyo. Maqaalkani waxaan ku tusaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato macruufka 12
Sida loo xakameeyo lambar taleefan
Sida aad u xiri karto lambarka taleefanka. Soo ogow qaababka si aad uga horjoogsato lambarrada taleefankaaga Android ama iPhone qaab fudud.
Sida loo wareejiyo sawiro ka iPhone in your computer
Baro sida sawiradaada looga minguuriyo iPhone-kaaga kombiyuutarkaaga si aad u ilaaliso oo aad ugu habeyso siyaabaha ugu fudud
Sida muusikada looga soo degsado Youtube
Sida loo ogaado haddii WiFi-ga la xaday
Soo ogow habab kala duwan si aad u ogaato in qof adeegsanayo WiFi guriga ama shaqada. Sida loo ogaado haddii WiFi-gaaga la xaday.
Habka ugu fudud ee looga soo dejisan karo fiidiyowyada iyo muusikada YouTube-ka
Haddii aad rabto inaad kala soo baxdo fiidiyowyo iyo muusig MP4 ama MP3 qaab YouTube ah, ha moogaanin casharradan, habka ugu fudud ee loo sameeyo.
Sida loo xaqiijiyo akoonkeena Instagram
Ogeysiisyada beenta ah ayaa noqday mid ka mid ah xumaanta weyn ee shabakadaha bulshada labadii sano ee la soo dhaafay. Aniguna waxaan leeyahay labadan sano ee la soo dhaafay, Haddii aad ugu dambayntii ku dhiirrigelisay inaad xaqiijiso koontadaada 'Instagram', qodobkan waxaan ku tusinaynaa dhammaan tallaabooyinka aad raaci karto si aad si dhakhso leh ugu qaban karto.
Sida loo joojiyo xayeysiiska Netflix inta udhaxeysa cutubyada
Ugu yaraan hadda waxaan ka hortagi karnaa Netflix inuu na tuso xayeysiiskiisa u dhexeeya cutubyada, waxaan ku tusineynaa sida aad u sameyn karto.
Ku soo dejiso ku dhowaad fiidiyoo kasta oo leh kordhintan Chrome
Baro sida looga soo dejisto fiidiyowyada ku dhowaad bog kasta oo kombuyuutarkaaga ah iyada oo ay ugu wacan tahay kordhinta Google Chrome.
Sida loo isticmaalo Citypaq de Correos iyo sida ugu badan ee looga faa'iidaysan karo
Waxaan kuu soo qaadanay cashar yar si aad si buuxda u fahmi karto sida Citypaq u shaqeyso iyo sida aan uga faa’iideysan karno si nolosheena ay ugu fududaato.
Sida loogu diro eBooks-kaaga Kindle adiga oo isticmaalaya Telegram
Baro hab cusub oo aad u fudud oo dhaqso badan oo eBugaagta aad ugu jeceshahay ugu dir akhristahaada Kindle, dhammaan Telegram
Sida loo abuuro liiska-heesaha oo aad heesaha aad sida ugu badan u dhagaystay Spotify
Ku abuur liistada liiska heesaha iyo fanaaniinta aad in badan ka dhegeysatay koontadaada 'Spotify' si fudud oo dhaqso ah
Sidee looga soo kabtaa koonto WhatsApp la xanibay
Barta fariinta ee WhatsApp ayaa noqotay mida ugu weyn ee ay ku wada xiriiraan malaayiin isticmaale. In kasta oo ay jiraan cillado na haysta Haddii aan aragnay sida koontadayada WhatsApp loo xanibay, sabab kasta ha noqotee, qodobkan waxaan ku tusinaynaa sida ugu fudud ee aan uga soo kaban karno
Sida loo ogaado haddii cinwaan emayl jiro
Shakiga ka bax oo ogow haddii uu jiro cinwaanka e-mailka ee aad maskaxda ku hayso laakiin aadan ogeyn inuu sax yahay iyo in kale.
Sida loo ogaado haddii bog internet uu nabad yahay
'Actualidad Gadget' waxaan kuu sheegaynaa tabaha loo baahan yahay si aad u ogaato haddii bog internet ammaan yahay.
Fortnite kuma jiri doono Google Play Store, sidee baan u rakibi karaa?
Fortnite lagama heli doono Google Play Store, waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo Fortnite-ka Android si aad si fudud ugu ciyaari karto.
Hal ikhtiyaar oo dheeri ah si aad u soo dejiso muusikada bilaash ah
Kala soo bax muusikada internetka qaab Mp3 ah si fudud oo dhaqso ah adoo raacaya casharradan fudud.
Sida ugu fudud ee loo tirtiro dhamaan qoraaladayda Facebook
Haddii aad rabto inaad ka tirtirto dhammaan raadadkaaga boostada boggaaga Facebook, raac casharradan si aad u barato sida.
PLC ama ku celcelinta WiFi? Kala duwanaanshaha iyo midka kugu habboon adiga oo eegaya kiiskaaga
Waxaan kuu sharaxeynaa waxa ay ku kala duwanyihiin PLC iyo ku celceliyaha WiFi, marka waad ogaan doontaa midka ay tahay inaad isticmaasho markasta.
Sida loo raaco 2018 International Champions Cup khadka tooska ah
Ha seegin faahfaahinta Koobka Kubadda Cagta International Champions Cup 2018 kombiyuutarkaaga ama aaladdaada gacanta.
Sida si joogto ah looga joojiyo koontadaada Amazon
Baro sida si joogto ah loogu tirtiro koontadaada Amazon wanaag.
Sida loo qariyo xiriirka barta Instagram si aysan iigu arkin khadka tooska ah
'Actualidad Gadget' waxaan kula laabaneynaa casharrada, waxaan ku baraynaa sida loo qariyo xiriirka barta Instagram si aysan iigu arkin khadka tooska ah.
Sida loo badbaadiyo Netflix adoo la wadaagaya koontadaada afar saaxiib
Adoo la wadaagaya Netflix ilaa afar saaxiib waxaad badbaadin kartaa inta ugu macquulsan oo waxaad ku raaxeysan kartaa waxyaabaha aan xaddidneyn.
Ugu dambeyntii! Waxaan hadda ku rakibi karnaa Chrome kordhinta Opera
Ku dheji kordhinta Google Chrome kordhinta Opera Browser si aad u sameyso biraawsarkaaga xitaa mid dhameystiran oo aad u wanaajiso khibradaada isticmaale.
Sida loo sameeyo icons taskbar ka weyn Windows 10
Maaddaama noocyada Windows-ku ay isbeddeleen, bar-hawleedku waxay qaateen door weyn. Kaliya waxaan leenahay Windows 10, haddii astaamaha ku yaal bar-bar-kulanku ay aad kuugu yar yihiin, markaa waxaan ku tusi doonnaa sida ugu dhaqsaha badan ee aan uga dhigi karno kuwa waaweyn.
Sida ugu dhakhsaha badan ee loogu beddelo xisaabaadka isticmaalaha Windows 10
Marka kumbuyuutar ay adeegsadaan dhowr qof, ama shaqada ama guriga, had iyo jeer waxaa lagula talinayaa in qof kasta oo ka mid ah dadka adeegsada, Nooc kasta oo cusub oo Windows ah, wuxuu na siiyaa habab cusub oo loogu kala beddelo koontooyinka isticmaale ee kala duwan ee aan abuurnay kooxda.
Sida loogu qiyaaso tayada internetkaaga FAST, mitirka xawaaraha ugu fiican
Imaatinka ADSL, tayada isku xirka internetka ee guryaheena ayaa qaatay bood aad u muhiim ah, xawaare iyo tayo labadaba iyo Sida loo cabiro xawaaraha isku xirkaaga internetka ee tijaabada xawaaraha FAST, kan ugu dhaqsaha badan, la isku halleyn karo oo dhameystiran.
Sida loo habeeyo asalka markaad ka jawaabeyso su'aalaha Instagram
Waxaan dooneynaa inaan ku tusino sida aad ugu badali karto asalka barta Instagram adoo ka jawaabaya su'aalaha si aad midkood kasta u siiso muuqaal shaqsiyeed.
Waxaan ku falanqeyneynaa makarafoonka HD Studio Signa ee ka socda Trust, wehelkaaga socodka ee qumman
Ku kalsoonow HD Studio Signa, wehelkaaga ugu fiican ee durdurrada, ciyaar-ciyareedyada iyo boodhadhka leh astaamo aan caadi ahayn.
Sidee loogala soo degaa muusikada MP3 iyo FLAC Deezer
Baro sida loogu soo dejiyo heeso tayo sare leh qaab 3Kbps MP320 iyo FLAC ah kombiyuutarkaaga si bilaash ah adoo u maraya Deezer.
Sida loo rakibo loona isticmaalo Windows 10 gabi ahaanba bilaash
Haddii aadan wali go'aansan inaad tijaabiso Windows 10 maxaa yeelay ma lihid ruqsad ansax ah, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa sida aad ugu rakibi karto bilaash iyo sharci
Sida loogu dhajiyo istiikarada su'aalaha sheekooyinka Instagram si fudud
Hadda waxaad ku dari kartaa istiikarada u oggolaanaya daawadayaasha Sheekooyinkaaga inay si fudud kuu weydiiyaan su'aalo, waan ku tusi doonaa sida.
Waa maxay qaabka qarsoodiga YouTube ee Android iyo sida loo dhaqaajiyo
Hada YouTube-ka loogu talagalay Android-ka waxaa ku jira qaab aan qarsoodi ahayn, marka waxaan ku tusaynaa waxa uu yahay iyo sida loo kiciyo.
Sida Loogu Beddelo Sawirada PDF-ga Windows 10
U badalida sawirka feylka loo yaqaan 'PDF file' waa geedi socod aad u fudud oo qaadan doona kaliya dhowr ilbiriqsi. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Sida loo meeleeyo toobiye kumbuyuutareedka loo gooyo Windows 10
Waxaan ku tusinaynaa sida aad si fudud ugu wareejin karto toobiye kumbuyuutarka barnaamijka Tartanka ee Windows 10.
Sida loo ogaado barnaamijyada marin u leh koontadayada Gmail
Arimaha gaarka ah ayaa noqday wax ka badan inta caadiga ah. Nasiib darrose, dhibaatooyinkaas oo dhan waxay billaabayaan inay daallan yihiin ...
Sida loo sameeyo kaliya maamulaha inuu u qoro koox WhatsApp ah
Waxaan ku tusineynaa sida aad u abuuri karto ama aad u qaabeyn karto kooxahan oo kaliya maamulka uu wax ku qori karo si WhatsApp looga dhigo meel aad uga wanaagsan
Tan iyo markii la bilaabay Windows 10 seddex sano ka hor, isticmaaleyaal badan ayaa si dhakhso leh u qaatay ...
Sida loo keydiyo xogta adoo adeegsanaya Spotify Lite, oo ah nooca waxtarka leh ee Spotify
Spotify Lite wuxuu yimaadaa Anadroid, waxaan ku tusineynaa sida aad ugu keydin karto xogta astaamaheeda isla markaana aad uga faa'iideysan karto muusikada nooca "Lite".
Sida loogu daro muusikada sheeko Instagram ah
Waxaan ku tusineynaa sida fudud ee aad ugu dari karto muusikada sheekada 'Instagram Story' qalabkan cusub.
Glass Curve Elite, sida loogu dhajiyo muraayadda ugu fiican ee saacaddaada casriga ah
Waxaan ku baraynaa sida loogu dhajiyo muraayad qaboojiye saacaddaada smartwatch, iyo wixii ka sarreeyaba maxay yihiin tayada muraayaddan muraayadda muraayadda ah.
Sida loo dhagaysto codadka WhatsApp si gaar ah iyada oo loo marayo dhagaha
Waxaan kuu sheegeynaa xeelad kuu oggolaaneysa inaad si gaar ah u dhageysato cajaladaha WhatsApp, iyada oo loo marayo dhegaha wicitaannada.
Sida loo joojiyo ogeysiisyada IGTV-ka cusub ee barta 'Instagram'
Haddii aad ka daashay helitaanka ogeysiisyada ku saabsan taleefankaaga casriga ah mar kasta oo fiidiyoow cusub lagu soo rogo barxadda IGTV Instagram, waxaan ku tusi doonaa sida aan uga fogaan karno.
Sida loo rakibo iOS 12-ka iPhone ama iPad hadda mar horeba si guud ayaa loo heli karaa
Saddex toddobaad ka dib markii la bilaabay beta-kii ugu horreeyay ee horumarinta ee iOS, Apple wuxuu kaliya sameeyay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 12 oo ay heli karaan dadka isticmaala.
Sida loo kiciyo loona abuuro kanaalka IGTV, telefishanka cusub ee 'Instagram'
Waxaan ku tusinaynaa sida aad u dhaqaajin karto ugana abuuri karto kanaal IGTV, telefishanka cusub ee 'Instagram'.
Ka faa'iideyso Netflix adoo u fidinaya Chrome-ka
Haddii aad haysato kombuyuutar kumbuyuutarkaaga ku xiran oo aad rabto inaad wax badan ka hesho koontadaada Netflix, halkan waxaa ah kordhinta ugu wanaagsan ee loogu talagalay Chrome.
Moobilkaygu ma lacag la’aan baa? Waxaan ku baraynaa inaad si dhakhso leh u ogaato haddii taleefannadeenna casriga ahi ay lacag la’aan tahay, ama ay ku xidhan tahay hawl wade, waa qodob go’aaminaya marka ay timaaddo inaan u adeegsanno shirkadaha kale ama haddii aannu doonayno inaan iibino.
WhatsApp wuxuu joojiyaa muujinta waxyaabaha kujira farriimaha kadib markii uu cusbooneysiiyay iPhone-ka illaa iOS 11.4
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee iOS 11.4 ee iPhone-ka, waxay abuureysaa iska hor imaad ogeysiis ah WhatsApp iyo WhatsApp oo joojiya muujinta labadaba qofka soo diray iyo waxa ku jira, ama kaliya soo diraha.
Sidee loogu dhaqaajiyaa WhatsApp kaarka SD
Ma u baahan tahay inaad u wareejiso WhatsApp-ka SD-ga mobilkaaga? Waxaan ku tusineynaa sida looga hortago WhatsApp inay boos ka hesho xusuustaada moobilka oo ay adeegsato kaarka dibedda.
Sida loo xayiro xiriirada WhatsApp
Waxaan ku tusineynaa sida loo xakameeyo xiriirka WhatsApp ee iOS ama Android. Haddii qofku kaa xanaaqo oo aad rabto inaad aamusiso, raac casharradeenna. Ma rabtaa inaad ogaato haddii lagaa xannibay WhatsApp? Waxa kale oo aad ku ogaan kartaa talooyinkayaga.
Sida loo daro loona sameeyo ebook kasta oo la jaan qaada Kindle-kaaga adoo isticmaalaya Telegram
Ma rabtaa inaad karti u yeelato inaad ku akhrido dhammaan buugag-gacmeedkaaga Kindle xitaa haddii aysan ku jirin qaabka MOBI? Deggan maxaa yeelay Telegram iyo bot "To Kindle Bot" waxaad si fudud ku heli doontaa
Sida loo soo dejiyo dhammaan waxyaabahaaga Instagram
Maqaalkan waxaan ku tusineynaa sida aan ku heli karno nuqul dhammaan waxyaabaha aan ku daabacnay shabakadda bulshada ee 'Instagram', oo ah shabakad bulsheed oo ku jirta dalladda Facebook.
Sida loo ogaado barnaamijyada marin u leh xogtaada Google
Ma dooneysaa inaad ogaato barnaamijyada dhinac saddexaad ee marin u leh xogtaada Google? Shirkadda internetka waxay ku siineysaa suurtagalnimada inaad ogaato liiska oo dhameystiran oo aad ruqsadaha kala noqoto haddii aad rabto. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo
Sida loogu daro dariiqa kumbuyuutarka arjiga "Snipping" ee Windows 8 iyo Windows 10
Ma dooneysaa inaad u sameysid kumbuyuutar kumbuyuutar arjiga Windows Snipping? Kani waa mid ka mid ah siyaabaha si deg deg ah oo fudud ugu bilaabi karo arjiga qaab macOS ugu nadiifsan
Kasoo dejiso nuqul dhammaan xogtayada Google
Haddii aad xiiseyneyso inaad ogaato waxa Google uu adiga kaa og yahay, qodobkaan waxaan ku tusaynaa sida aan u soo dejisan karno dhammaan waxyaabaha aan wadaagnay iyo inaan sii wadno inta aan adeegsaneyno adeegyadooda.
Sida loo helo muusikada fiidiyowga ee bilaashka ah
Websaydhada bixiya muusikada ka madaxbannaan boqortooyada ayaa ku caan baxay webka guushii ay ka gaadhay YouTube-ka iyo lacag-soo-saarkeeda awgeed, maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa qaar ka mid ah boggaga ugu caansan ee lagu helo muusig lacag la’aan ah.
Sida loo hubiyo loona tirtiro taariikhda goobta Khariidadaha Google
Haddii aad ka daashay Google ogaanshaha halka aad u socoto, waxaa la gaadhay waqtigii lagala tashan lahaa oo la tirtiri lahaa taariikhda goobta Khariidadaha Google
Tani waa sida qaabka Focus Focus ama Portrait Mode loogu isticmaalo barta Instagram
Habka Sawirka ee 'Instagram' waxaa loo yaqaan 'Focus Mode' wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad sawirrada iskaa u qaaddo heer kale iyadoo ay ugu wacan tahay falanqeyntiisa qoto dheer. Waxaan ku tusaynaa sida loo kiciyo.
Sida ugu fudud ee loogu beddelo HHD-ga SSD-ga laptop-ka
Waxaan ku baraynaa sida ugu fudud ee HHD loogu badalo SSD laptop-ka, talooyinka aasaasiga ah si aad adigu u sameysan karto.
Sida loo nadiifiyo taariikhda Google
Haddii aad ka walwalsan tahay arrimaha gaarka ah ee Google oo aad rabto inaad tirtirto dhammaan taariikhda Google ay kugu kaydisay adiga, hoosta waxaan ku tusaynaa dhammaan tallaabooyinka aad raacayso si aad u awoodid inaad tirtirto taariikhda Google. Ka tirtir wixii raad kugu ah ee internetka, goobaha, barnaamijyada iyo wixii intaa ka badan!
Sida loo diro faylal waaweyn
Haddii aan isku aragno baahida loo qabo in la diro faylal waaweyn, qodobkaan waxaan ku tusinaynaa tiro badan oo xulashooyin ah oo diyaar ah oo si dhaqso leh oo fudud lagu sameeyo.
Sida loo ogaado inta xog ee moobil kasta uu cuno
Miyaad ka walwashay kharashka xogta ee ay sameeyeen barnaamijyada moobiilkaaga? Ma rabtaa inaad ogaato inta barnaamijyada xogta sida Spotify, Netflix, YouTube, Facebook ama kuwa kale ay cunaan? Gali oo soo hel sida loo ogaado isticmaalka data ee barnaamij kasta oo taleefankaaga casriga ah.
WhatsApp wuxuu kordhiyaa waqtiga si loo tirtiro farriimaha la soo diray
Ragga ku jira Facebook waxay kordhiyeen waqtiga ugu badan si ay u tirtiraan fariimaha aan horey u dirnay in ka badan hal saac.
Sidee loo kaydiyaa Gmail
Miyaad nolol nus ah ku leedahay koontadaada Gmail? Hagaag, kahor inta uusan khalad dhicin oo fariimahaaga - iyo lifaaqyada - baaba'aan, samee nuqul nuqul ah. Waxaan sharaxeynaa sida loo sameeyo
Mobile-kayga waa la xaday Maxaan sameeyaa?
Haddii nasiib daro taleefankaaga gacantu kaa lumay ama lagaa xaday oo aadan garanayn waxa aad ku kici karto si aad u soo ceshato, waxaan ku tusi doonaa sida aan ugu dhaqaaqi karno isku dayga inaan ku soo ceshano ama aan gebi ahaanba ka hor istaagno
Sida loo aamusiiyo bogagga shabakadda ee Chrome
Fiidiyowyada is-ciyaaruhu miyey ku dhibayaan biraawsarkaaga? Google Chrome waad ku aamusiin kartaa websaydhada waxaanan ku tusaynaa sida loo sameeyo
Ciyaarta xayawaanka Google
Ciyaarta dinosaur ee Google Chrome waxay noqotay bedel aad ufiican daqiiqadahaas dhintay ee aan haysanno ama marka aan runtii ka maqnayn khadka internetka, aaladdayada mobilada iyo kombuyuutarka labadaba.
Sida loo dajiyo casriga casriga ah ee loo yaqaan “Android smartphone” si uu dhakhso ugu socdo
Haddii taleefannadeenna casriga ah ee 'Android' ay bilaabeen inay si gaabis ah uga socdaan sidii caadiga ahayd, waxaan dooran karnaa inaan adeegsanno xeeladdan yar ee dedejineysa kala-guurka oo siinaya dareen xawaare ah oo aanan haysan ka dib cusbooneysiintii ugu dambeysay.
Bedelka xogta ka iPhone in Android iyo wax ka badan
dr.fone wuxuu noo siinayaa bedel kale iyada oo loo marayo barnaamijkeeda kaas oo noo oggolaan doona inaan ku wareejino dhammaan xogta laga soo diro iPhone-keena illaa Android cusub iyo kan kale.
Sida loo qorsheeyo xidhitaanka otomaatiga ah ee Windows iyo Mac
Haddii aynaan rabin PC ama PC-gayagu inay qaataan saacado ka badan intii lagama maarmaanka u ahaa hawlgalka, waxa ugu fiican ee aan samayn karnaa waa barnaamijka si toos ah loo xiro, ama Windows ama Mac. Waxaan ku baraynaa dhowr hab oo aad si otomaatig ah u xidho kombuyuutarkaaga waqtiga aad rabto.
Sida loo xakameeyo loona shido PlayStation 4-kaaga foomka telefishankaaga Smart TV
Waxaan ku tusineynaa sida aad toos ugu maamuli karto PlayStation 4-kaaga TV-gaaga smart-ka ah iyada oo aan dhib lagu arkin.
Sida loo wadaago xiriirkaaga WiFi adoo adeegsanaya lambar QR ah
Miyaadan jeclayn inaad siiso xogta marinka gurigaaga isku xirka WiFi? Hagaag, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad ku samayso lambar QR ah
Sida loo duubo shaashadda Windows 10 PC-gaaga
Maanta waxaan ku sharaxeynaa qaab fudud sida loogu duubo shaashadda Windows 10, iyada oo loo marayo arjiga hooyo iyo codsiyada kale ee saddexaad.
Cusboonaysiinta Windows-ka ayaa sii hubinaysa cusbooneysiinta aan joogsi lahayn? Marka waad hagaajin kartaa
Cusboonaysiinta Windows waxay joogtaa munaasabado badan iyagoo raadinaya cusbooneysiin iyo si aad ugu xalliso hab fudud waxaan kuugu soo bandhigeynaa casharkaan.
Tilmaamaha si aad uga faa'iideysato daabacahaaga
Yuu ku guuldareystay inuu daabaco waqtiga ugu haboon ee aan munaasibka aheyn? Waxaan kuu keenaynaa tabaha ugufiican si aad uga faa iideysato qoraagaaga oo aan kuu hoos dhigin.
Kabsado password Gmail
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo soo cesho lambarka sirta ah ee 'Gmail' haddii aadan xusuusan ama aadan marin u lahayn boostadaada Google. Waxaan sidoo kale ku barinaa inaad bedesho
Waxaan kuu sheegeynaa sida si faahfaahsan looga tirtiro dhammaan akoonnada emaylkaaga, iyadoon loo eegin inay yihiin Gmail, Yahoo ama Hotmail
Ma u baahan tahay inaad qaabeyso router-ka? Baro dhammaan macluumaadka si aad uhesho router-ka oo aad u beddesho qaabeynta, lambarka sirta ah, dekedaha, magaca shabakadda iyo inbadan
Iswaafaji macruufka ama ogeysiisyada Android Windows 10
Waxaan kuu sharaxeynaa sida loo waafajiyo ogeysiisyada ka dhexeeya aaladaha leh Windows 10 iyo aaladaha leh Android iyo iOS si aad u fududeyso noloshaada
Faa'iidooyinka ku shaqeynta laba shaashad
Laba ayaa ka wanaagsan mid? Waxaan halkaa u aadnay inaan falanqeyno maxay yihiin faa'iidooyinka iyo madax-xanuunka la shaqeynta laba kormeere.
Sida sawirada iyo fiidiyowyada looga soo dejiyo barta Instagram qaab fudud
Ka soo degsashada sawirada iyo fiidiyowyada barta 'Instagram' waa fududahay waxaana kuu sheegi doonaa sida loo sameeyo iOS, Android ama kombiyuutarkaaga. Ma taqaanaa sida loo soo dejisto sawirrada iyo fiidiyowyada instagram?
Sida loo isticmaalo xisaabaadka emaylka ee ku meel gaarka ah
Ma u baahan tahay emayl ku meel gaar ah? Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo abuuro koonto emayl ku meel gaar ah si loo joojiyo helitaanka spam.
Sida loo sameeyo baaritaanka Wifi
Xisaabinta Wifi waxay noo ogolaaneysaa inaan ogaano hadii xiriirkeena Wifi uu amaan ka yahay faragalinta suurtagalka ah. Miyaad ka furi kartaa furaha WiFi? Soo ogow!
Sida loo kordhiyo xawaaraha WiFi ee gurigeenna
Internetku miyuu gaabis yahay? Ha moogaanin tilmaamahan iyo tabahaan si aad u dardar geliso xiriirkaaga oo aad u aragto haddii WiFi-gaaga la xaday.